Ama-Proteas aqhakazisa i-Mdantsane Cricket Hub
Abadlali bekhilikithi abancane base-Mdantsane Hub bathole ithuba elivela kanye empilweni lokuqeqeshwa ama-Standard Bank Proteas e-East London ngoLwesihlanu.
Usekela mqeqeshi wama-Proteas u-Adrian Birrell, usize abadlali ngokuphosa, ukushaya kanye nendlela yokuvimba ibhola, nosizo oluvela ku-Claude Henderson, u-Temba Bavuma, u-Dwaine Pretorius, u-Dane Paterson no-Wiaan Mulder.
Bekuhanjelwe abadlali abasuku kude abacishe babe ngu-50, okulethe injabulo kwikhaya lowayengumdlali wama-Proteas ophosa ngokushesha, u-Makhaya Ntini.
Ama-Hubs nama-RPCs (Regional Performance Centres) asebenza kahle ekuguquleni ikhilikithi kanye nokushintsha izimpilo ngokuletha amatalente aphuma emalokshini kanye nasemakhaya kusukela kuqala eminyakeni emithathu edlulile. Abadlali abaningi abancane abaphuma kuloluhlelo bafinyelela ezindaweni zabancane kwizifundazwe noma bathole ibhasari ezikoleni zekhilikithi eminyakeni emithathu edlulile.
“Asijwayele ukuba nesikhathi sokuchitha nabasikhonzile ngakho namhlanje kube usuku olumnyama,” oshayela ama-Proteas, u-Temba Bavuma esho emuva kosuku. “Sisemakhaya ase-Eastern Cape kodwa ikhilikithi ihamba phambili, wonke umuntu olapha uyawuthanda lomdlalo kanye nama-Proteas, sithemba ukuthi sizothola abadlali bakusasa abazophuma kule-Hub.”
“Kwakukhona amadlali abafana no-Makhaya Ntini, ophuma lapha, ongambukela uma usakhula, sithemba ukuthi singaba isibonelo kubadlali abaningi bekhilikithi. Lama-Hubs ezweni azokwenza okukhulu ekuvezeni amathalente kanye nokwenza isiqiniseko sokuthi ikhilikithi idlalwa yonke indawo kwisizwe.”
U-Mfundo Gege, umqeqeshi kwi-Hub kanye nomabhalane e-Mdantsane, uthiuhambo luzogqugquzela abadlali ukuthi basebenze kakhulu ukufeza amaphupho abo. Waphatha kusukela kuqala ngo-2014, futhi uyalithembaithalente eliphuma e-Eastern Cape.
“Namhlanje sibe nomcimbi ozoba umlando,” kusho u-Gege. “Bekukhona ama-Proteas lapha, akaze kwenzeke lokhu. Sinezingane ze-KFC mini-cricket, ama-U13 nama-U19 amantombazane, kanye nabafana be-U15 kuma-net. Kithina kube ithuba lokuthi abadlali bethu bathole iziyalo kanye nokugqugquzelwa kumaqhawe abo. Sithemba ukuthi abadlali abancane bathole ugqozi futhi bazi ukuthi bangaphumelela ngelinye ilanga ukudlalela i-South Africa.”
“Siyajabula ukuthi bathole isikhathi njengoba bematasa ukuguqula izimpilo zabalandeli babo. Lokhu kuzobagqugquzela kakhulu abadlali uma beqhubekela phambili, ikakhulukazi ukubabona ngamehlo hayi kumabonakude, bazobona ukuthi ukusebenza ngokuzimisela kuzobabeka kude.”
“Lezingane ziphuma emakhaya ahluphekayo,” esho eqhubeka. “Ukuthi bakwazi ukuhlangana no-Bavuma no-Adrian Birrell, kuyabakhombisa ukuthi abancane ngaleyondlela. Lokhu kuzobakhuphulela ukuzithemba kanye nokubagqugquzela ukuqhubekela phambili.”
Ama-Proteas alungiselela umdlalo wesithathu we-Momentum ODI bedlala ne-Bangladesh ezodlalelwa e-Buffalo Park e-East London ngeSonto.
Umdlalo uzoqala ngo-10h00.
u-De Villiers ubuya ngokuncomayo lapho okumele abe khona i-CSA ihalalisela ama-Proteas ngokunqoba i-ODI series Kusafana nephupho – u-Mulder u-Frylinck ubizwe kwiqembu lama-Proteas kuma-T20 Ama-Proteas ashishiliza ekunqobeni ngama-wicket angu-10 Ama-Proteas aqalela phansi ngaphambi kwe-ODI series u-Miller uzongena kwiqembu lama-ODI angu-100 Ukunqoba kunika ukuzithemba ngaphambi kwehlobo elikhulu – u-Du Plessis i-CSA ihalalisela ama-Proteas ngokunqoba i-Test series bedlala ne-Bangladesh u-7Rabada unqobisa ama-Proteas i-series ngokuphosa Abadlali abadala badlala indima ekubuseni kwama-Proteas